Blog Posts | The Grand Dental
သွားလေးတွေ ညီညီညာညာ နဲ့ ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ အပြုံးများ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ သမားရိုးကျ မဟုတ်တဲ့ ပိုမိုခေတ်မီကောင်းမွန်တဲ့ ကုသမှုကို ရှာဖွေနေပါသလား?
ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သွားအစစ်အမှန်ကိုဖယ်ရှားစရာမလိုပဲ ရက်ပိုင်းအတွင်း ညီညာလှပပြီး ရယ်ပြုံးလိုက်တိုင်း ပုလဲလေးတွေစီတန်းထားသလို ထင်ပေါ်တဲ့ အပြုံးအလှပိုင်ရှင်တစ်ယောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲလို့ရပါပြီခင်ဗျာ။
သင့်သွားတွေ ဝါနေလို့ အရောင်မွဲနေလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား ?? မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်ရှိရှိ ပြုံးနိုင်ဖို့ ဖြူဖွေးလှပတဲ့သွားလေးတွေက အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍမှာပါဝင်နေပါတယ်...
အံဆုံး ဆိုတာ အိပ်နေတဲ့ကျားပါပဲ။ အမြဲတမ်းတော့ ဒုက္ခပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူဒုက္ခပေးချင်တဲ့အချိန် ဒုက္ခပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။.
သွားကြွေလွှာကပ် ခြင်း နှင့် သွားစိုက်ပြီး အဆင်မပြေမှာ မလှပမှာ စိုးရိမ်နေပါသလား။
PDSD ဆိုတာ သွားအလှအပကုသမှုတွေကို ပြီးပြည့်စုံအောင် ဖန်တီးရာမှာ အရေးပါလှတဲ့အပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ဒီဇိုင်းဆွဲရာမှာ ဘာတွေလုပ်မှာလဲဆိုတော့...........
နှစ်နဲ့ချီပြီး အံကြိတ်နေရင် မေးရိုးဆစ်ရောဂါ၊ သွားပြုန်းတီးခြင်းနဲ့ နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေခံစားရပြီး၊ သွားတွေ သိပ်တိုလာရင် ကုသရခက်ခဲတာမို့ သိတာနဲ့ ဆရာဝန်ပြဖို့ လိုပါတယ်။
ခံတွင်းအနံ့ဆိုးခြင်း ကို ဘယ်လိုကုသမလဲ ။
ခံတွင်းအနံ့ဆိုးခြင်းကို ပျောက်ကင်းဖို့နဲ့ ထပ်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖို့ နည်းလမ်းအသွယ်သွယ် ရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ခံတွင်းသန့်ရှင်းခြင်းဟာ ခံတွင်းအနံ့ဆိုးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သွားဆေးခန်း တွေမှာ တချို့လူနာတွေက သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို အမှန်အတိုင်း မပြောပြကြပါဘူး။ အဲ့ဒီလို အချက်အလက်အမှားတွေက ကုသမှုတွေကို အများကြီး အနှောက်အယှက်ပေးနိုင်သလို လူနာကိုလည်း အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အသက် ဘယ်နှနှစ်မှာ သွားညှိဆရာဝန် ( Orthodontist )နှင့် ပြသရမလဲ....
တချို့ ကုသမှုတွေက အသက်ကြီး မှ ပြုပြင်၍ မရသော အခြေအနေ တွေရှိပါတယ်။ တချို့ ပြသနာတွေက သွားညှိအထူးကုဆရာဝန် ကပဲ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
Autoclave ဆိုတာ သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်တစ်ခုအပေါ် ဖိအားပေးပြီး ပိုးသတ်တဲ့ ပေါင်းအိုး ဖြစ်ပါတယ်။